बिबाह पछि युवतीहरूको शरीरमा यसकारण आउछ परिबर्तन ? यस्ता छन् १० रोचक परिवर्तन – नेपाली संगसार
बिबाह पछि युवतीहरूको शरीरमा यसकारण आउछ परिबर्तन ? यस्ता छन् १० रोचक परिवर्तन
नेपाली संगसार calendar_today १५ माघ २०७७, 5:24 am
विवाह पछि युवतीहरूमा मा’नसिक, भावनात्मक र श’रीरिक परिवर्तन आउँछ । युवतीहरूको शरीर रिप्रोडक्शनको लागि बनेको हुन्छ । परिपक्क उमेर पश्चात् उनीहरूमा ओभुलेशन अर्थात् अण्डा बन्ने प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।
म’हिनावारीको शुरुवात हुन्छ र ग’र्भधारणको लागि तयार हुन्छन् । विवाह पछि रिप्रोडक्टिभ आर्गेन्स पनि पहिलेको तुलनामा बढी परिपक्क हुन्छ ।
वजन बढ्नु-विवाह पछि युवतीहरूमा हार्मोनल परिवर्तन आउँछ । यसबाट भोक बढ्छ, बोसो जम्मा हुनथाल्छ र वजन बढ्छ ।
बोसो बढ्नु- विवाह पछि युवतीहरूको शरीरमा बोसो बढ्छ । पेट, ति‘घ्रा, कुहिनो र छा’तीमा बढी बोसो जम्मा हुन्छ ।
कपला बढ्नु- विवाह पछि युवतीहरूमा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्सको स्तर निकै बढ्छ । यसको कारण कपाल बाक्लो र कालो हुन्छ ।
महिनावारीमा परिवर्तन- महिनावारीको चक्रमा कुनै परिवर्तन हुँदैन तर हर्मोन्स सक्रिय हुनुको कारण ढिलो वा पहिले नै हुनसक्छ ।५-सं’वेदनशिलता – विवाह पछि युवतीहरूको शरीरको सं’वेदनशिलतामा पनि परिवर्तन आउँछ । उनीहरू स्प’र्श प्रति बढी सं’वेदनशील हुन्छन् ।
चम्किलो त्वचा– विवाह पछि युवतीहरूमा कयौँ यस्ता हर्मोन्स निर्माण हुन्छन्, जसको कारण त्वचा नरम, चम्किलो र स्वस्थ हुन्छ ।७-स्वस्थ मुटु– विवाह पछि युवतीहरूको शरीरमा एस्ट्रोजन नामक हार्मोनको स्तर बढ्छ । यसले मुटुको रक्षा गर्छ ।८-शरीरको ग’न्धमा परिवर्तन– विवाह पछि महिलाको शरीरमा एस्ट्रोजन बढ्छ । यसको कारण शरीरको ग’न्ध तीव्र हुन्छ ।
मस्तिष्क सक्रिय र स्वस्थ– हार्मोन्स सक्रिय हुने र तनाव र चिन्ता कम हुने कारणले मस्तिष्क पनि बढी सक्रिय र स्वस्थ हुन्छ ।
रिप्रोडक्टिभ आर्गेन्समा परिवर्तन- विवाह पछि जेनिटल आर्गेन्स र रिप्रोडक्टिभ आर्गेन्स प्रेग्नन्सीको लागि तयार हुन्छ र उनीहरूमा परिवर्तन आउँछ ।